Tun Tun's Photo Diary: Cameron Highland, Malaysia #4 (Strawberry and Vegetable Farm)
Cameron Highland, Malaysia #4 (Strawberry and Vegetable Farm)
We visited this vegetation farm as our first destination of the second half-day tour.
Second Half day tour ရဲ.ပထမနေ၇ာ အနေနဲ. သစ်သီးတွေ ပန်းတွေ အစုံ စိုက်တဲ့ စိုက်ခင်း ကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ မိုး၇ွာနေပေမယ့် စိုက်ခင်းက အမိုးပါလို. အေးအေးဆေးဆေး လှည့်ပတ် ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ်။လက်လက်ဆက်ဆက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပန်းတွေ ကို ဆိုင်ဖွင့်ပြီးေ၇ာင်းပါတယ်။ အိမ်မှာ ချက်စားချင်တဲ့ သူတွေ ဆို၇င်တော့ အရမ်းကို ၀ယ်ချင်စ၇ာ ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးပေါ့။ ကျွန်တော်က တော့ မနက်ဖြန် စင်ကာပူ ပြန်မှာ ဆိုတော့ ဘာမှ မ၀ယ်ခဲ့ဘူး။ တော်ကြာ Immigration မှာ အ၇စ်ခံ၇မှာလဲ စိုး၇ိမ်တာကိုး။
ပြင်ဦးလွင်က စတော်ဘယ်၇ီ ခြံကို အ၇င်တုန်းကတော့ေ၇ာက်ဖူးတယ်။ ပြင်ဦးလွင်က စတော်ဘယ်၇ီက နည်းနည်းသေးတယ် ပြီးတော့ သူကမြေကြီးအောက်မှာ ချပြီးစိုက်တာ။ အခု စတော်ဘယ်၇ီ အသီးက အကြီးစား။ ပန်းအိုးနဲ. စိုက်ထားတာ။ အမှန်တကယ်တော့ မြန်မာပြည်က စတော်ဘယ်၇ီ ကပိုပြီးစားလို.ကောင်းတယ်။ ဒီစတော်ဘယ်၇ီ အကြီးက သိပ်ပြီးတော့ အ၇သာမ၇ှိဘူး။ မချို မချဉ်ကြီး။
စတော်ဘယ်၇ီ အပင်တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖြစ်တယ်။ လှတာကိုး။ အဲ့ဒီ ခြံလေးထဲမှာ တခြားအပင်တွေလဲ တပိုင်တနိုင် အစုံစိုက်ထားသေးတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ငှက်ပျောပင်၊ ဂေါ်ဖီအမည်း၊ သခွားမွေး စသဖြင့်။
စားလို.၇တဲ့ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက် အပြင် ဆိုင်ထဲမှာ ဟောဒီ အလှစိုက်တဲ့ Cactus အပင်တွေ၊ နှင်းဆီပင်တွေလဲ ရှိသေးတယ်။
ရှမ်းမုန်ညင်းချဉ်မှာ ပါတဲ့ အသီး။ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုးတုံးလုံ အသီးလို.ခေါ်တယ်။
နောက်တနေ၇ာ မသွားခင် ဆိုင်ထဲမှာေ၇ာင်းတဲ့ အသီးအ၇ွက်တွေ အပင်တွေ ကို ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်ခဲ့တယ်။ ဒီအောက်က နှင်းဆီပန်းတွေ တော်တော်လှတယ်။ ပန်းအတုနဲ.တောင်သွားတူနေတယ်။ ဒီနေ၇ာ ပြီးတော့နောက်ထပ်သွားမည့်နေ၇ာ ကတော့ ကန္ဒမာ ပန်းစိုက်ခင်းပါ။ စောင့်ပြီး ဖတ်ကြပါဦး။း)
at 6/04/2014 07:25:00 AM
Labels: Cameron Highland, Flower, Malaysia
အရွက်က အမည်းရောင်နဲ့ အသီးအနီရောင်နဲ့အပင်က ငရုတ်ပင်လား ဘရာသာ :)
Tun Tun June 5, 2014 at 12:16 AM
အစိမ်းေ၇ာင် သီးတဲ့ ဟာကတော့ င၇ုပ်ပင် သေချာတယ်။ အနီေ၇ာင်ကတော့ ငရုတ်သီး မဟုတ်ဘူး။ တ၇ုတ်ဟင်း၇ည် တွေထဲမှာ ထည့်တဲ့ အနီေ၇ာင် အသီးထင်တာပဲ
Strut in Style on Orchard Gateway, 2014
Cameron Highland, Malaysia #5 (Chrysanthemum Farm ...
Cameron Highland, Malaysia #4 (Strawberry and Vege...